Apple wuxuu ka saarayaa aaladda "Activation Lock" aaladda webka | Waxaan ka socdaa mac
Maanta waxaan ku dhawaaqeynaa shey ku saabsan amniga aaladaha Apple. Ilaa shalay, isticmaaleyaasha aalad kasta oo Apple ah, ha ahaato iPhone, iPad, iPod ama MacBook, waxaan fursad u helnay inaan ogaano in kombiyuutarkeennu uu ilaalinayo Qalabka "Activation Lock" adoo galaya degel kana galaya IMEI qalabkeena.
Sidan oo kale, waxaan ku ogaan karnaa haddii aaladdaas la xannibay ama la isticmaalayo, gaar ahaan markii fikraddeennu ahayd inaan soo iibsanno aaladda gacanta labaad ee Apple. Marka waan ogaan karnaa xaaladda aaladda xitaa kahor intaan iibsaneyn. Wax runtii waxtar leh iyo in hadda aysan mar dambe suurta gal noqon doonin.
Hadda, Apple waxay ka saartay qalabkii hubiyay xaalada aalad kasta iCloud. Mar dambe suurta gal ma noqon doonto in la sameeyo jeeggan ka hor inta aan la iibsan aaladda gacanta labaad ee Apple. Websaytka Apple ayaa hadda soo celinaya a "404 BAAHIN Baadi". Haddana shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino ma aysan sharraxin sababta ay uga saartey adeegga shabakadeeda.
Waa inaan xasuusnaano in shaqadan si otomaatig ah ayuu u shaqeynayay markii uu awood u siinaayay wixii la yaqaan "Raadi iPhone-kayga", kaalintiisuna waxay ahayd inay ka hortagto cid kasta oo kale inay isticmaasho iPhone, iPad, iPod Touch, Apple Watch, ama MacBook haddii waligeed la waayo ama la xado.
Tan awgeed, farsamada maanta loo yaqaan Apple ayaa loo adeegsaday, Aqoonsiga Apple iyo lambarka sirta ah. Guud ahaan, waxay ahayd farsamo awood badan oo u adkaysata weerarada dibedda, waxaana lagu soo bandhigay macruufka 7, iyadoo la heli karo ilaa rubucii ugu dambeeyay ee 2014.
Xilligan la joogo, xog dheeraad ah lama oga, ama haddii Apple qorsheyneyso inay dib u dhisto nidaamkeeda amniga aaladda. Waan la socon doonnaa wararka uu Apple noo keenayo. Waqtigaan la joogo, waxaan dhihi karnaa oo keliya, weligiis "Qufulka Furaha."
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple wuxuu ka saarayaa aaladda "Activation Lock" aaladda shabakadda
Fiidiyow cusub oo ka socda Apple Campus 2, Febraayo
Ogow waxa "All My Files" galka ku yaal Raadiyaha